Ny fandinganana ny data dia mora amin'ny Semalt
. Ankehitriny, ireo orinasa ireo dia te-hanangona angon-drakitra anatin'ny minitra maromaro ary hiezaka ny hahita ny fomba mahomby indrindra hahatratrarana ny tanjony. Ny fampitomboan'i Web Scraper amin'ny Chrome dia vahaolana tena tsara ary manolotra ireo fitaovana sy vokatra mahagaga ampiasainy. Ny mpampiasa dia tsy mila manana fahaizana manokana momba ny ordinatera manokana ampiasaina amin'ny programa rindrambaiko - 24 hour plumbing service near me.
Rehefa mampiasa an'io fitaovana io ny mpikaroka web ka azony atao ny manangana sitemap mba hahafahan'izy ireo mijery ny tranokala sy ny angon-drakitrao. Amin'ny fampiasana singa samihafa, ny tranokala dia afaka mijery ny tranonkala mba hahazoana angona sasany, toy ny lisitra, sary, votoaty, ary latabatra. Amin'ny ankapobeny, isaky ny manokatra pejy iray avy amin'ny tranonkala iray ny gidro, mila manangona singa ny mpampiasa. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy tsindriana amin'ny sitemap izy ireo amin'ny fisafidianana ny 'Scrape'. Raha toa ka mila mampiato ny fizotran'ny dingana izy ireo, dia mila manakatona izany varavarankely izany ary azony atao ny mitazona ny angon-drakitra fanampiny. Avy eo, azo averina aseho amin'ny endrika CSV ny angon-drakitra.
Ity rakotra angona r dia fitaovana tsotra sy mahomby ary mahavotra. Manome tombony vitsivitsy izany, toy ny fanangonana tahirin-kevitra izay afaka mamaky ireo rafitra misy ny data, toy ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny mpifanerasera, ny vidiny, ny vokatra, ny mailaka ary ny hafa.
Fanakanana pejy maromaro misoroka fandrefesana
Ny famaritana dia manome teknika lehibe ho an'ireo mpampiasa mba hahafahany manatanteraka ny fomba tsara indrindra ahafahana manangona ny angon-drakitra. Ho fampitaovana fampahalalana avy amin'ny tranonkala maromaro maro dia hampiasa dingana roa dingana isika:
Voalohany, hahazo ny URL rehetra ho an'ny tranonkala miaraka amin'ny fanonganam-panjakana , dia hamoaka ny vaovao avy amin'ireo tranonkala mampiasa ny Refine. Raha toa ka te-hanangona angona avy amin'ny rohy amin'ny pejy hafa tahaka ny pejy web, ny mpikaroka web dia afaka mampiasa pagination hanaraka ny pejy manaraka. Ny mpampiasa ihany koa dia afaka mampifangaro tetikady sasany mba hahafahana mibaribary sy mikaroka amin'ny tranonkala samihafa. Azonao atao, ohatra, ny manokatra lisitr'ireo URL mba hikapoka azy ireo ary avy eo dia hikaroka amin'ny valiny.